Pyae Phyo (MMiTD): ♪ Software Collections 12.8.2016 ♫
♪ Software Collections 12.8.2016 ♫
i-Device သမားတွေအတွက် နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ Firmware ဗားရှင်းသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ကထက် Security ပိုင်းတွေပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ Features သစ်များစွာပါဝင်မှာပါ။
2. iTunes 12.3. & iTools 3.3.4
Entertainment ပိုင်းမှာသိပ်ကိုအားထားရတဲ့ iTunes ဗားရှင်းသစ်နဲ့ Phone Management ပိုင်းအတွက် Features စုံလင်လှတဲ့ iTools ဗားရှင်းသစ်တို့ကို တစ်ခွေတည်းနဲ့ ပေါင်းစပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
3. Revit MEP 2017 Essential Training
Electrical ပိုင်း၊ Mechanical ပိုင်းနဲ့ Plumbing ပိုင်းတွေအတွက် ကဏ္ဍစုံ Computer Aided Design တွေစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ Revit MEP 2017 အသုံးပြုပုံကို စနစ်တကျရှင်းလင်းတင်ပြထားတဲ့ သင်ကြားရေးခွေ ဖြစ်ပါတယ်။
4. Autodesk Navisworks Simulate & Manage 2017
Comments, redlining, viewpoint, measurements အစရှိတဲ့ ကဏ္ဍစုံ Tool Set တွေများစွာပါဝင်တဲ့ နာမည်ကျော် 3D Design ဆော့ဖ်ဝဲလ် Navisworks Simulate ရဲ့ ဖန်တီးမှုအသစ် 2017 ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။
5. SAP Basis Essentials Training
အသင်းအဖွဲ့တွေ၊ ကုမ္ပဏီတွေအတွက် Operations Management, Human Capital Management, Financials Management အစရှိတဲ့ကဏ္ဍစုံစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းဆိုင်ရာများကို စနစ်တကျတတ်ကျွမ်းနားလည်စေဖို့ ရှင်းလင်းတင်ပြထားတဲ့ Training ခွေဖြစ်ပြီး Topic (၁၀)ခု ခွဲခြားသင်ကြားပေးမှာပါ။